ကိုယ့်ကို စိတ်ကုန်သွားတဲ့ ချစ်သူ မိမိထံအမြန်ဆုံး စိတ်ပြန်လည်လာရန် အစီအရင် - CeleLove
October 9, 2019 Cele Love ဗဟုသုတများ 0
ချစ်သူ က မိမိကို ချစ်ကြိုက်ပြီးမှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား ….?ချစ်သူက အတည်တကျ လက်ထပ်မယ်ပြောဆိုပြီး တာဝန်မယူပဲ ထားသွားခြင်းကိုခံနေရပြီလား ….? အိမ်ထောင်သည် ယောင်္ကျား မယားငယ် ယူထားလို့ အိမ်ရှင်မများ စိတ်သောက ရောက်နေပြီလား ….?
– စတီးပန်ကန်ပြား ၁ချပ်
– ဆန် ၁ ဘူး
– ကွမ်းရွက် ၃ ရွက်
– ဖယောင်းတိုင် အဝါ ၂ တိုင်
– မိမိချစ်သူ ဓာတ်ပုံ ၁ ပုံ
– သော့ခလောက် ၁ ခု
စတီးပန်ကန်းပြားပေါ်တွင် ဆန်တစ်ဘူထဲ့ပါ။ပြီးလျှင် မိမိချစ်သူဓာတ်ပုံတင်လိုက်ပါ …။ ထိုဓာတ်ပုံပေါ်တွင် ကွမ်းရွက်၃ရွက်ကိုတင်ပါ ။ ထိုကွမ်းရွက် တရွက်ချင်းစီတွင် မိမိဖြစ်ချင်လိုသောဆန္ဒများရေးပါ။ ကွမ်းရွက်၃ရွက်စလုံးတွင်ရေးချပါ …။ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေပါစေ – အချစ်ရေးအဆင်ပြေပါစေ – ကိုယ့်ဆီအမြန်ဆုံး အဆက်အသွယ်လုပ်ပါစေ ရေးပါ …။
ပြီးလျှင် သော့ခလောက်ကိုတင်ပါ။ထိုသော့ခလောက်ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်အဝါရောင်၂ တိုင် ထွန်းရပါမယ် …။ ဤအစီအရင်ကို ပြုလုပ်မည့်သူ မိမိမွေးနေ့တွင်ပြုလုပ်ပါ …။
(ဥပမာ -မိမိက စနေသမီးဖြစ်နေပါက စနေနေ့စပြုလုပ်ရမည်) ၃ရက် တိတိဖယောင်းတိုင်ပဲ လဲထွန်းရပါမယ် …။
ကျန်ပစ္စည်းလဲစရာမလိုပါ …။ ၃ရက်ပြည်လျှင် ရေ ထဲစွန့်ပါ …။
အချိန် – မနက် ၁၀နာရီ အတွင်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ် …။
#ဆရာမ စုစုနိုင် (ဗေဒင်နှင့်ယတြာ)
ကိုယျ့ကို စိတျကုနျသှားတဲ့ ခဈြသူ မိမိထံအမွနျဆုံး စိတျပွနျလညျလာရနျ အစီအရငျ
ခဈြသူ က မိမိကို ခဈြကွိုကျပွီးမှ အဆကျအသှယျဖွတျသှားလို့စိတျညဈနပွေီလား ….?ခဈြသူက အတညျတကြ လကျထပျမယျပွောဆိုပွီး တာဝနျမယူပဲ ထားသှားခွငျးကိုခံနရေပွီလား ….? အိမျထောငျသညျ ယောင်ျကြား မယားငယျ ယူထားလို့ အိမျရှငျမမြား စိတျသောက ရောကျနပွေီလား ….?
– စတီးပနျကနျပွား ၁ခပျြ
– ဆနျ ၁ ဘူး
– ကှမျးရှကျ ၃ ရှကျ
– ဖယောငျးတိုငျ အဝါ ၂ တိုငျ
– မိမိခဈြသူ ဓာတျပုံ ၁ ပုံ
– သော့ခလောကျ ၁ ခု
စတီးပနျကနျးပွားပျေါတှငျ ဆနျတဈဘူထဲ့ပါ။ပွီးလြှငျ မိမိခဈြသူဓာတျပုံတငျလိုကျပါ …။ ထိုဓာတျပုံပျေါတှငျ ကှမျးရှကျ၃ရှကျကိုတငျပါ ။ ထိုကှမျးရှကျ တရှကျခငျြးစီတှငျ မိမိဖွဈခငျြလိုသောဆန်ဒမြားရေးပါ။ ကှမျးရှကျ၃ရှကျစလုံးတှငျရေးခပြါ …။ အိမျထောငျရေးအဆငျပွပေါစေ – အခဈြရေးအဆငျပွပေါစေ – ကိုယျ့ဆီအမွနျဆုံး အဆကျအသှယျလုပျပါစေ ရေးပါ …။
ပွီးလြှငျ သော့ခလောကျကိုတငျပါ။ထိုသော့ခလောကျပျေါတှငျ ဖယောငျးတိုငျအဝါရောငျ၂ တိုငျ ထှနျးရပါမယျ …။ ဤအစီအရငျကို ပွုလုပျမညျ့သူ မိမိမှေးနတှေ့ငျပွုလုပျပါ …။
(ဥပမာ -မိမိက စနသေမီးဖွဈနပေါက စနနေစေ့ပွုလုပျရမညျ) ၃ရကျ တိတိဖယောငျးတိုငျပဲ လဲထှနျးရပါမယျ …။
ကနျြပစ်စညျးလဲစရာမလိုပါ …။ ၃ရကျပွညျလြှငျ ရေ ထဲစှနျ့ပါ …။
အခြိနျ – မနကျ ၁ဝနာရီ အတှငျးပွုလုပျလို့ရပါတယျ …။
#ဆရာမ စုစုနိုငျ (ဗဒေငျနှငျ့ယတွာ)
လမ်းလျှောက်တတ်ခါစ သမီးလေးရဲ့တင်ပါးကို ဓားရှည်ဖြင့်လှီးဖြတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ဖခင်